Maya Magazine: January 2010
Posted by Maung Aye Win at 10:57 PM No comments:
Posted by Maung Aye Win at 10:54 PM No comments:
Posted by Maung Aye Win at 7:31 PM 1 comment:
၁၉၉၅ နိုဝင်ဘာ ၃၀ တွင်၊ မန္တလေးမြို့ ဆွံ့အနားမကြားကျောင်း ရံပုံငွေအတွက် ပြုလုပ်တဲ့ စာပေဟောပြောပွဲမှာ ရွတ်ဆိုတဲ့ ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းရာမှ လွတ်မြောက်လာပြီး ပထမအကြိမ် ဟောပြောပွဲတက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maung Aye Win at 9:33 AM2comments:
[၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာကြီး တင်မိုးကို အမှတ်တရအဖြစ် လမင်းတရာစာပေဆက်ဆံရေးမှ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး ရေးသားခဲ့သော "ဗုဒ္ဓနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် အခြားကဗျာများ" စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။]
အရပ်မှာ "ဗျိုး" ဟစ်ပြီး
ရွာအနှံ့ ရပ်အနှံ့ မောင်းထု
ဓမ္မ န္တရာယ် အစစ်ပါပဲလို့
စာအုပ် စာတမ်း ရေဒီယို
သူပုန်ထမဲ့ ဗကပ တဲ့
ဗကပ လှုံ့ ဆော်လို့
ပြဿနာရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ် အရင်းအမြစ်ကို
ဇူလိုင် ၇ ရက် သက်သေပါ။
တခါလာ ဗကပနဲ့ တခါလာ ဗကပနဲ့
မြို့ ရွာတွေ မီးတိုက်လိုတိုက်
တကယ့် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါလားနော်။
ဂျစ်ကားတောင် မောင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ပြေးရ လွှားရ ပုန်းရ အောင်းရ
တိုင်းပြည်ရဲ့ ရန်သူဟာ ဗကပလို့
ဖွတ်မွဲစာရင်း တို့တတွေ ရောက်ကုန်ပြီ၊
အလံနီ အလံဖြူ လက်နက်ချနဲ့
ရန်ကင်း ကမ္ဗောဇ ဗိုလ်ချုပ်ရွာတွေမှာ
ကွန်မြူနစ် ဆိုရှယ်လစ် ကျေးဇူးတွေနဲ့
စားဦး စားဖျားတွေ ဝေစားခဲ့ကြတယ်။
မဆလက မွေးဖွားတဲ့ လူတန်းစားတရပ်
အရက်တငုံ ကျိုက်ပြီး လွှတ်တော်ဝင်
တပါတီစနစ် ဖြုတ်ချ၊ ဒီမိုကရေစီ အများဆန္ဒနဲ့
အစိုးရဖွဲ့ရေး လူထုက ဟစ်ကြွေးတော့
ဆူပူအောင်လုပ်တာ ဗကပ လို့တမျိုး
သတင်းတွေ ချဲ့ ကား
အထူ အပိန်းတွေ မထင်ကြနဲ့တော့
"ပြည်သူတွေဟာ ဗကပ မဟုတ်"
ပါးစပ်က ဘုရား ဘုရား
စားဖား လူကြီးမင်းများ ခင်ဗျား............။ ။
[ ၂၀၀၀၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်မှာ လမင်းတရာစာပေဆက်ဆံရေးက ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့
"တင်မိုး ရဲ့ ဗုဒ္ဓနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့် အခြားကဗျာများ"စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်]
Posted by Maung Aye Win at 11:04 PM2comments:
ဦးလေးရဲ့ 'ပန်းနဲ့စစ်သား'ကို တွေ့ရတယ်။
ဦးလေးရဲ့စာ၊ ဦးလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံ
ဒေါ်ဒေါ်ရဲ့ 'မြန်မာပြည်တွင် စစ်ဆေးခဲ့သော
ဦးလေးဟာ ဒေါ်ဒေါ်ရဲ့ ဦးလေးမှန်း
'ငါ လူထုဦးလှကို မြင်ဖူးပြီ'လို့
မမေ့နိုင်ပါ။ အာရုံထဲက မပျောက်နိုင်ပါ။
၁၉၅၀- ခုနှစ်က ရုပ်ပုံလွှာပါ။
ဦးလေးဟာ လူငယ်ပေမယ့် နာမည်ကဟိန်းလွန်းလို့
ဦးလေးကို မြင်ဖူးရုံနဲ့ပဲ ကြက်သီးမွေးညှင်း ထမိတယ်။
ဦးလေးရဲ့ စာဆိုယင် စိတ်ဝင်တစား ပီတိပွါးနေပြီ။
အမှတ် (၁)ကစပြီး ကဗျာပို့ခဲ့တယ်။
မပါပါ။ ကျွန်တော့ကဗျာ မပါပါ။
ပါ မပါလဲ မစဉ်းစား။
ဦးလေးရဲ့ လူထုဂျာနယ် အမှတ်(၁၃)မှာ
နောက်- ၂၅- မှာ-
၁၉၅၇ - ခုနှစ်မှာ -
ကိုမောင်မောင် (မန်နေဂျာ)က - -
ကျွန်တော်က "လူထုဦးလှနဲ့တွေ့ချင်လို့" လို့
တွေ့ပေးရ ကောင်းနိုးနိုး- -
စဉ်းစားတယ်။ ကျွန်တော့ကို ထပ်လဲမမေးတော့ဘူး။
"ခဏနေနော်"တဲ့၊ ဦးလေး အခန်းထဲဝင်သွားတယ်။
အားနာလိုက်တာ။ ကိုယ့်မှာက ပြောစရာစကားလဲမရှိ။
ကျွန်တော်က ဦးလေးကို မော့ကြည့်ပြီး စကားမဟ။
ဦးလေးက ကျွန်တော့ကိုကျော်ပြီး သူ့ဧည့်သည်ကိုရှာ။
သူ့ကို တွေ့ချင်တဲ့လူငယ် ဟုတ်ပုံမရဘူးလို့ ဦးလေးတွေးနေမိသလား။
ဦးလေးဟာ ဧည့်သည်မမြင်လို့ ပြန်ဝင်မလိုအလုပ်၊
ပြီးမှ ကျွန်တော့ကို လက်ညှိုးညွှန်တယ်လို့ထင်တယ်။
သည်တော့မှ- ဦးလေးဟာ ကျွန်တော့ကိုကြည့်မိပြီး--
"သြော်.... ဦးလေးနဲ့ တွေ့ချင်တာ မင်းလား" တဲ့။
အသံက ချိုအေးလိုက်တာ၊ ရင်ထဲမှာ ရင်းနှီးသွားတယ်။
"ဦး.. ဦးလေးနဲ့ တွေ့ချင်လို့ပါပဲ... ကိစ္စ အထူးမရှိပါဘူး"
ဦးလေးဟာ ကျွန်တော့ကိုခွင့်လွှတ်တယ်၊ နားလည်တယ်၊
"အေး... အေး.. နောက်မှတွေ့ရအောင်နော်...
အေး.. အေး.. နောက်လဲ လာခဲ့နော်"လို့
ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ ချိုသာတဲ့ အပြုံးရိပ်နဲ့
ဦးလေးဟာ သူ့အခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဦးလေးနဲ့တွေ့ရပြီဗျာ၊ တွေ့ဖူးပြီဗျာ၊ စကားပြောဖူးပြီဗျာ။
ကျွန်တော့ကို တက္ကသိုလ်လိုက်ပို့ဖို့ လိုက်လာတဲ့
လူထုတိုက်ကိုဝင်ပြီး ကျွန်တော်ခင်တဲ့ ဦးလေးနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။
နောင်အခါ လူထုတိုက်ကိုလာ၊ ဦးလေးနဲ့ ဒေါ်ဒေါ်တို့နဲ့
ဦးလေးနဲ့တွေ့ပြီး စကားတခွန်းမှ မပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့
ကျွန်တော်တို့၊ ကိုသာနိုးတို့၊ ကိုဝင်းမောင်တို့၊
ကိုသိန်းနိုင်တို့၊ ကိုရွှေသော်တို့၊ ကိုမိုးသူတို့၊
ကိုအောင်ခင်တို့၊ ကိုနီမောင်တို့၊ ကိုဘတုတ်တို့၊
ကိုလေးတို့၊ သန်းဌေးတို့၊ မျိုးမြင့်တို့
ပေါ်ဦးတို့၊ ၀င်းဖေတို့၊ ဂလိတင်ဝင်းတို့၊
...တို့၊ ...တို့၊ ...တို့
ဦးလေးရဲ့ စေတနာကို မမေ့နိုင်ပါ။
သည်းခံခြင်း၊ လမ်းကောင်းညွှန်ခြင်း၊ ဆိုဆုံးမခြင်း၊
ဦးလေးနဲ့ ဒေါ်ဒေါ်တို့ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့လက်ကို
မမျှော်လင့်ပဲ ၀မ်းသာအားရ ဆုံခဲ့ရတယ်။
ကံ့ကော်ပင်ရိပ်... မိုးမတိတ်တတိတ်.. မိုးစိပ်စိပ်
မိုးစက်တွေကြားမှာ မှုန်တ၀ါးဝါး ပျောက်ကွယ်
ကဗျာတပုဒ်ထဲက ကျန်ခဲ့တဲ့ ပန်းတပွင့်ဟာ
ကြွေလွင့်သွားတဲ့ ပန်းကလေးကို ငေးမောကျန်ခဲ့တယ်။
သြဂုတ်လရဲ့ မိုးစက်တွေထဲမှာ မျောပါခဲ့ပြီ။
[လူထုချစ်သမျှ လူထုဦးလှ စာအုပ်၊ ပထမအကြိမ်နှိပ်ခြင်း၊ ၁၉၈၄၊ သြဂုတ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။]
Posted by Maung Aye Win at 11:00 PM No comments:
Posted by Maung Aye Win at 10:44 PM No comments:
Posted by Maung Aye Win at 8:47 AM No comments:
ရင်ထဲမှာ သိုဝှက် ထားတတ်ကြပါတယ်။
သူ့ရင်ကို တဖန် ခွဲ၍
သူ့ မျက်ရည်ကို တဖန် လုယူ၍
မိမိ ချစ်သူတို့၏ လည်မှာ
The Egg of Tears
by- Maung Pan Hmwe
translated by- Khin Aye Thet
A pearl, my love,
Isatear-egg.
Dose the oyster hide
Breaks it open,
Grab her tear-egg,
To adornabeloved's throat,
How ill-fated is the little oyster.
Posted by Maung Aye Win at 10:07 AM 1 comment:
Posted by Maung Aye Win at 11:39 PM 1 comment:
Posted by Maung Aye Win at 8:10 AM No comments:
Posted by Maung Aye Win at 8:43 AM No comments: